आलेख: ‘कोभिड १९’– चीनबाट के सिक्ने ?, प्रा.डा.राजीव झाको अनुभव « लुम्बिनी सञ्चार
आलेख: ‘कोभिड १९’– चीनबाट के सिक्ने ?, प्रा.डा.राजीव झाको अनुभव
प्रकाशित मिति :4April, 2020 11:18 pm
“सरी है, चीनबाट साथीहरुको निरन्तर फोन आएकाले तपाईंहरुलाई कुराएँ” प्रा.डा. झा कुराकानीलाई अब तयार हुनुभयो । हामीलाई पनि जिज्ञासा भयो कोरोना विषयमा नै जान्ने । किनभने यतिखेर संसारका मानिसले सबैभन्दा धेरै खोजी गरेको र सुन्न चाहेको विषय कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने नै होला सायद । हामीले पनि यहीँबाट वार्ता शुरु गर्याैं– तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको अनुदान कस्तो हो ? यसबाट के गर्ने हो ?
तीन महिना पहिलेको ‘कोभिड–१९’ को मुहान मानिने उहान यतिखेर भने सामान्य जीवनमा फर्किसकेको छ । मेट्रो रेल तथा बस चल्न शुरु गरेका छन् । मानिसहरु सामान्य अवस्थामा फर्केका छन् । कलकारखाना, होटल, रेष्टुरेन्ट नियमित जस्तै भइसकेका छन् । चिनियाँले यति चाँडै उहानलाई यस्तो सामान्य अवस्थामा ल्याइसकेको छ । अझ आफ्ना केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारका अनुसन्धान कोषहरुलाई यति चाँडै ‘कोरोना अनुसन्धान कोष’ मा परिणत गरेर अनुसन्धानदाता र वैज्ञानिकलाई अनुदान दिन थालिसकेकोले आगामी दिनमा चिनियाँहरु कोरोनाको विषयको अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउलान् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसबाट हामीले पनि केही सिक्न सकिएला भनेर उहाँले प्राप्त गरेको यो व्यक्तिगत अनुसन्धानवृत्तिको विषयमा बताइदिन अनुरोध गर्यौं र यहाँ प्रस्तुत गरेका हौँ ।
नेपाल र चीनको बीचको मैत्री सम्बन्ध पनि पछिल्ला दिनमा झनै फैलिएको छ । राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई लेखिएको पत्र त्यसैको उदाहरण भएको झाको भनाइ छ । सरकारी तथा गैरसकारी तहमा पनि राम्रो भातृत्व रहेको उल्लेख गर्दै झाले भन्नुभयो “हामीले आग्रह मात्रै गर्याैं भने चीनबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भइहाल्छ ।”
चीनले इटाली, स्पेन, सर्विया र अब अमेरिकालाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगले संसारभर नै चिनियाँहरुप्रति सकारात्मक धारणा थप विस्तारित हुने झाको बुझाई छ । “सङ्कटमा कसले कस्तो सहयोग गर्यो भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
#Prf. Dr Rajiv Jha